Xa uya kuphicotho - zincwadi , ukwazi iimizila zakho kunye nokuba ngumlingani akuzona izinto ezifunekayo ukuba uzilungiselele. Ukwazi indlela 'yokukhahlela' ngokufanelekileyo unokuba yisigqibo sokwenza ukuba ungayifumana okanye ungayibhala umsebenzi! Nazi ezinye iingcebiso malunga nendlela yokuqhuba "i-slate" enkulu.
Yintoni iSlate? Kwaye kutheni kubalulekile kangaka?
"Isalathisi" sisisunguliso xa uphicothwa kwiprojekthi.
Ngokuqhelekileyo, xa uhamba kwi-audition - yezobugcisa okanye yorhweba - uya kucelwa ukuba ulandele igama lakho kwikhamera ngaphambi kokuba ungene "kwimeko" oye uyilungiselele. Kulungile kakhulu, ewe?
Ngokwicatshulwa, i-slate yomdlali kufuneka ibe lula. Nangona kunjalo, ngabaphi abadlali abaninzi abangaqondi ngokupheleleyo ukuba i-slate yakho yileyokuqala (kwaye ngamanye amaxesha kuphela) ingqiqo enokuyinika umlawuli okhangelayo (kwaye mhlawumbi umlawuli kunye nabani na omnye kwigumbi lokuphicothwa). I-slate yakho iyicandelo lokuphicothwa kwe-mini ngaphakathi kwayo. Oko kuthetha ntoni - ukuba i-slate yakho ayikho ingcali, iqhutywe ngendlela efanelekileyo, okanye ukuba ayinayo into-umlawuli okhuphayo unokukhetha ukuba angayi kubukela uphicotho lwenu. Oku kuyinyani ngokukodwa kwi-casting castings xa inkqubo yokukrazula ingahamba ngesivinini sombane.
Slate njani ngokufanelekileyo
Ukufumana impumelelo njengomdlali wecala kubangelwa inxalenye enkulu yokuba nguwe kwaye uyindalo.
Xa udibanisa ikhamera, cinga nje ngokuba uzingenisa kumntu othile. Fumana ngokucacileyo njengoko unako xa ufumana umntu ukuba "uzenzele". Kwenye yeeklasi zam eziyingxenye yomqeqeshi weCosyber Barry, ongumqeqeshi waseLos Angeles, "uCarryne Barry Creative," utitshala wancoma kubafundi ukuba sithatha njengokuba sizithumela kumongameli we-arhente yentengiso wayekhangela abadlali kumashishini athile, umzekelo.
Oko kuthatha ukunyamezela ngokuthetha nje igama lakho kwikhamera kwaye liyifake endaweni yendawo yokutya okuya kuba nayo xa uxoxa nomntu.
IiShishini zoRhwebo kunye neTrateral
Uya kugubungela iincwadi zophicotho zentengiso kunye nezobugcisa; Nangona kunjalo, inkqubo yesikhwama ihluke ngokuthe ngqo. Ukuthengisa ngokuqhelekileyo uza kuzifaka ngale ndlela elandelayo, kwakhona njengokungathi uzifaka kumntu okokuqala ngqa: "Sawu, igama lam nguYesse Daley." Emva koko uya kucelwa ukuba unike "iiprofayile" zakho.
Xa umphathi weseshoni ecela ukuba "ubone iiprofayile zakho," uye ngasekunene, uze ubuyele phambili, uze uye ngasekhohlo, ukuze ikhamera ibone ubuso bakho bonke. Ngokuqhelekileyo, ukuba ngaba, ngaba ufanele uphendule kwikhamera ngaphandle kokuba ucelwa ukuba wenze njalo! Kuya kubonakala kungenakuncedo.
Ngezinye iimeko, unokucelwa ukuba ubonise phambili nangemva kwezandla zakho. Ukuba lo mcimbi uphakamise, vuka uphakamise izandla zakho phambi kwesifuba sakho, njengokungathi uzimisele ukunika ikhamera "i-high-five", ngenxa yokungabi noluvo olulungekileyo. Emva koko, vula izandla zakho ukuze ikhamera ibone ezinye ihlangothi zezandla zakho.
Ukuqhawulwa kweeTyhuthi kuluhluke, njengabalingisi abaqhelekanga ngokuthi "Sawubona" ​​kwikhamera.
Izilwanyana zophicotho-zincwadi zibandakanya ukuchaza igama lakho kwaye emva koko umlinganisi ophengulule ngawo. Ngokomzekelo, ndiya kuphicothwa ngophicotho, uye kwikhamera, kwaye uthi, "UJesse Daley, ufundela indima (igama lendima)."
Isihluthulelo sokutshatyalaliswa kukuba yendalo. Isingeniso sakho akufanele sibe ngaphezu kwephezulu, kwaye ngokuqinisekileyo akufanele kube nzima. Njengokuba kunjalo xa uqala ukudibana nomntu, ufuna ukunika umbono wokuqala obonisa ukuzithemba nokulula. Ufuna umntu ukuba abukele i-slate yakho ukuba acinge, "Lo mdlali uyingcali kwaye ubonakala enobungane."
Ukufumana iingcebiso malunga nendlela yokuphatha kakuhle (kunye nokufunda indlela yokuvavanya kakuhle), ukufumana iklasi ehloniphekileyo kwikhamera ibalulekile. Iiklasi ezimbini ezibalulekileyo ukujonga kuzo yiCarolyne Barry Creative (okukhankanywe ngasentla) nakwiiKhamera zeKhamera kunye noKristuinna Chauncey.
Biography kaYul Brynner